यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सु; त्केरी पूरा पढ्नुहोस् -
Home News यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सु; त्केरी पूरा...
विज्ञानले नयाँ नयाँ खोजको विकास गरेको छ । कसैको कल्पनामा पनि नभएका कुराहरु विज्ञानले सम्भव तुल्याइदिएको छ । सन्तान जन्माउने विषयमा पनि विज्ञानले यस्तै आश्चर्यजनक कुरा सफल सावित गरेको छ ।
Previous articleभर्खरै ब’न्जीजम्पका क्र’ममा डोरी चुँ’डिएपछि ८० फिट तल ख’सेर महिलाको मृ’त्यु !
Next articleश्री’मती मा’रेर पराल भित्र पुरे, यी व्यक्तिले ! ससुरालीबाट घर फर्किदा बाटैमा रबिनले यस्तो गरे Dilmaya (भिडियो हेर्नुहोस)